महरा–मेनिया: उज्यालोबाट अँध्यारोतिर | रुपान्तरण
महरा–मेनिया: उज्यालोबाट अँध्यारोतिर
१९ कार्तिक २०७६, मंगलवार १४:१६
आजको दिनमा हिजोका मितिको कुरा नगरौं भनेर मात्र हुँदैन । किनकि, आजको कुरा हिजोको मितिसँगै जोडिएर आउँछ । आजको दिनमा न कृष्णबहादुर महराले मलाई चिन्छन् न म नै उनलाई व्यक्तिगत रुपमा चिन्दछु । तर कृष्णबहादुर महरालाई ‘महरा सर’को नाममा सुनेको अढाई दशक नाघिसकेको छ ।
उतिबेला गाउँमा हुलाक, प्राधिकरण थिए । कमेरो र रातो माटोले लिपिएको विद्यालयका चौडा र फराकिला भित्ता थिए । गाउँमा मोटो मशाल भित्रिएको बेला मेरो उमेर दश वर्ष पनि कटेको थिएन । रमाइलोका लागि अरुको ब्रस (कुची) र बाल्टीन बोकेर हिंड्ने त्यही ‘वातावरण’ आज आएर महरा सरको कहानीसँग जोडिने रहेछ ।
सामन्तवाद के जाती, भूमि कसको जोत्नेको, जनसङ्घर्ष…, के के जाती संघर्ष इत्यादी नारा रङ्गाउन त्यो बेला अरुको कुची र बाल्टीन नबोकिदिएको भए …। गेरु घोलिएको टिनको बाल्टीन बोकेर ‘मशाल’का दाईहरुको लैलैमा नलागिएको भए आज को कहाँको महरा सर ! के मतलव रहन्थ्यो र ?
सानो गोठको माथिल्लो कोठामा कसले महरा सरको कुरा गरे दिमागले खुट्याउँदैनथ्यो । तर कट्टुको ईंजार राम्रोसँग बाँध्न नजान्ने बेलामा अग्रजहरुले गरेको तिनै ‘महरा सर’ को चर्चा गिदीमा गड्यो । फेरि गाउँमा संयुक्त जनमोर्चा भित्रियो । पुरानो नारामाथि नयाँ नारा पोत्न फेरि उनीहरुलाई रातोमाटोको जोहो पनि बालखैले गर्दिने त हुन् । हुलाकमुनीको ढिस्कोको माटो कोतरेर जनमोर्चाको बाल्टी भरिएपछि तिनले कतिबेला नयाँ नारा रंगाउँथे, थाहा हुने कुरा भएन केरे । जनमोर्चा सल्बलाएको बेला जनवादी नाम दिइएको साँस्कृतिक कार्यक्रम वर्षेनी जसो हुन्थ्यो । बाबुराम भट्टराई र महरा सरबारे अरुले गरेको कुरा सुनेर कलिलो गिदीमा तस्वीर खिच्ने कुरा रह्यो । अर्थोक केही होइन । यो २०४९-५० ताककै कुरा हो ।
‘महरा सर’ लाई ‘अमरसिंह’को रुपमा पढेको अलि पछि हो । ५३-५४ देखि । तर फलानो ‘अमरसिंह’ त्यही रोल्पाको विज्ञान शिक्षक, त्यही बेला चुनाव जितेका जनमोर्चाका नेता नै पक्का हो भन्नेमा चाँहि सन्देह थिएन ।
सशस्त्र विद्रोहको एउटा कालखण्डमा महरा सर र उनका विद्यार्थीहरुको लीला सुनेर, पढेर हुर्कने क्रम जारी रह्यो ।
वार्ताटोलीको संयोजक भएर काठमाण्डौ झरेको बेला महरा सरलाई देखें । सूचना तथा संचारमन्त्री हुँदा, पार्टीको प्रवक्ता हुँदा संयोगले फेरि भेट भए । आफ्नै टिमले दुःखले तयार गरेको समाचार सामाग्री वृत्तचित्रको रुपमा सार्वजनिक हुने तय भएपछि फेरि भेट भयो । कुनै बेला माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका अमर गिरी (पछि प्राज्ञ) को डेरामा पुग्दा सुनेको तिनै महरा सर र मैले भेटेको महरा सरमा तात्विक फरक थिएन । मलाई लाग्थ्यो अरुले जे जसरी चित्र र चरित्र उतारेका थिए, महरा सर हूबहू उस्तै रैछन् । अर्थात् असन्तुष्टीलाई, उग्रतालाई, आक्रोशलाई, रिसलाई पनि शिष्ट, शान्त, नम्र भएर अभिव्यक्ति दिनसक्ने । र, विपक्षलाई चाहिने तर्क तयार गरेर राख्ने ।
र त्यो नमिठो हुन्छ । ज्यादै नमिठो ।
महरा सरले धेरैको विश्वास र आस्थाको पत्रमाथि अनायाश ‘व्यभिचारको एसिड’ खन्याइदिए झै भयो होला । अरुलाई पनि । व्यभिचारको अर्थ कुमार्ग एवम् निकृष्ट आचरण नभइदिएको भए महरा सरलाई चिन्नेले उस्तो चासो देखाउँदैनथे पनि कि ! धेरै जन छाँगाबाट खसेको जस्तो हुँदैनथे कि ? अब त यस्ता अनुमानका अर्थ पनि रहेनन्, सबैले सबै पचाइसकेका छन् । सान्त्वनाका ओखती पनि आलोचनाका वीष पनि ।
पात्रगत सम्बन्धमा ईख र वीषको घोल तयार भएपछि त्यही मसीले लेखिने हो नियति भने त्यो न रुचिकर हुन्छ न प्रियकर । त्यो श्रवणीय पनि हुँदैन दर्शनीय पनि हुँदैन । समयले दिने यो शिक्षा विश्वविद्यालयरुपी संस्थाबाट कहाँ मिल्छ ? मिल्दैन ।
महरा–रोशनी प्रकरणमा लतपत भएको ‘अनिमा र अनिमस’को कथ्य र कहानी प्रहरी, अदालतको बाटो हुँदै कारागारको फलामे डण्डीले घेरिएको अँध्यारो चौघेरामा पुगेको छ ।
वासनाको कालो दाग लिएर कठघराको बाटो हुँदै कारागारको फलामे बारभित्र शिर निहुर्याएर टहलिरहुनुभएका महरा सर हेरे हुन्छ ।